के हो आस्टियोपोरोसिस रोग?:: Naya Nepal
के हो आस्टियोपोरोसिस रोग?
हड्डी सम्बन्धी रोग हो, अस्तियोपोरोसिस । यसको जटिलता के छ भने, हड्डी कमजोर हुँदै जान्ने र भाँचिने भय रहन्छ । जबकी यो समस्या पुरुषको तुलनामा महिलालाई हुनेगर्छ । ५० बर्ष पार गरेसँगै हरेक तीन महिलामा एक जनालाई यस्तो समस्या हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । विभिन्न अध्ययनमा के पाइएको छ भने आस्टियोपोरोसिसकै कारण विश्वमा हरेक तीन मध्ये एक महिला तथा पाँच मध्य एक पुरुषलाई आस्टियोपोरोसिसका कारण हड्डी भाँचिने जोखिम बढ्ने गर्छ ।जब अस्टियोपोरोसिसले च्याप्न थाल्छ, हड्डी सिथिल र कमजोर हुन्छ । आस्टियोपोरोसिस भएमा नयाँ कोषिकाको निर्माण तीव्र गतिमा हुन पाउदैन, जुन गतिमा पुराना कोषिका बद्लिन जरुरी छ । नतिजा, हड्डी कमजोर हुँदै टुट्न थाल्छ ।यस्तो समस्या बढ्नुमा अहिलेको हाम्रो जीवनशैली पनि जिम्मेवार छ । जथाभावी खानपान, एकै स्थानमा लामो समय बस्ने बानी, व्यायामको कमी, अत्याधिक जंकफुडको सेवन ।
आस्टियोपोरोसिसको समस्या विभिन्न कारणले हुने गर्छ । यसमा वंशानुगत कारणदेखि पोषक तत्वको कमीसम्म छन् ।वंशाणुगत, प्रोटिनको कमी, भिटामिन डी तथा क्याल्सियमको कमी, मधुमेह, थायराइड, व्यायामको कमी, धुमपान, मदिरापान तथा उमेरका कारण पनि यो रोग लाग्ने गर्छ । त्यसबाहेक, अधिक मात्रामा चिसो पेय पदार्थको सेवन, अधिक मात्रामा नुनको सेवन तथा महिलाहरुमा महिनावारी छिटै सुक्ने कारणले पनि यो रोग लाग्ने गर्छ । बाथरोग, युरिक एसिड, बव्जियत, गैस्ट्रिक, प्यारालैसिस, पार्किन्सन्स, मृगौला तथा कलेजोको समस्या, रगत सम्बन्धि रोग, क्यान्सर लगायतका कारण पनि आस्टियोपोरोसिस हुने गर्छ ।
बसपार्कमा छैन चहलपहल, सबै सिटमा यात्रु राख्न पाउने निर्णयबारे के भन्छ यातायात विभाग?
काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा दशैं नजिकिँदै जाँदा काठमाडौंका बसपार्कहरुमा निकै चहलपहल हुने गरेकोमा यस वर्ष भने खासै चहल पहल छैन । खास गरेर काठमाडौंको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा विगतका वर्षहरुमा दशैंको पूर्वसन्ध्यामा हुने किसिमको भीडभाड यस वर्ष छैन । कोरोना महामारीका कारण गत चैत दोस्रो सातादेखि बन्द भएका सार्वजनिक सवारी गत १ असोजदेखि आधा यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको थियो । शनिबार देखि विजयादशमी सुरु हुन भएपनि यस वर्ष बसपार्कमा खासै चहल पहल नभएको बस व्यवसायी बताउँछन् ।
कोरोनाको महामारी फैलिएकोले केही यात्रु यसअघि देखि नै गाउँमा भएका र केहीले गाउँ फर्किनै नचाहेका कारण यात्रुको सँख्या उल्लेखनीय नभएको व्यवसायी बताउँछन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रि महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य यात्रु नभएकाले यस वर्ष टिकेटको अग्रिम बुकिङ खुला गर्न नसकेको बताउँछन् । यात्रु नभएकोले धेरै जसो बस रित्ता पठाउनु परेको कर्माचार्यले बताए । उसो त पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक सवारीमा क्षमता अनुसार सबै यात्रु राखेर यात्रा गर्न पाउने निर्णय गरेको समेत आफुले सुनेको कर्माचार्य बताउँछन् । तर, आधिकारिक रुपमा आफुहरुलाई सरकारबाट केही जानकारी नआएको उनको भनाई छ । ‘क्षमता अनुसारको यात्रु राख् पाउने मैले पनि सुनेको हुँ’ उनले भने, ‘सरकारबाट आधिकारिक रुपमा अहिलेसम्म केही पनि जानकारी आएको छैन ।’ क्षमता अनुसार यात्रु राखेर सवारी चलाउन पाएपनि यात्रु नपुग्ने उनको भनाई छ । गत चैतमा लकडाउन सुरु हुँदा र त्यसपछि असारमा लकडाउन खुकुलो गर्दा धेरै यात्रुहरु बाहिरि सकेका कर्माचार्यको बुझाई छ ।यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा क्षमताको आधा यात्रु राखेर डेढ गुणासम्म बढी भाडा लिएर सञ्चालन गर्न पाउने निर्देशिका यस अघि नै जारी गरेको थियो । निर्देशिका अनुसार यात्रुले यात्रा गर्ने ठाउँबाटै खाजा, पानी बोक्नु पर्ने लगायतका मापदण् राखिएका थिए । पछिल्लो समय मन्त्रीपरिषदले सवारी साधनमा क्षमता अनुसार सबै यात्रु राख्न पाउने निर्णय गरेको केही सञ्चार माध्यमहरुमार्फत थाहा पाएपनि आधिकारिक रुपमा जानकारी नआएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्नेबारे सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत हामीले पनि थाहा पाएका हौं’ उनले भने, ‘आधिकारिक रुपमा केही जानकारी आएको छैन । आएपछि सूचना निकाल्छौं ।’